झटारो - प्रधानमन्त्री ओलीसँग संक्षिप्त वार्ता - Asian Samachar
झटारो – प्रधानमन्त्री ओलीसँग संक्षिप्त वार्ता
Asian Samachar आइतवार, साउन १६, २०७३ (1 year ago) कार्टुन, समाचार
पत्रकार — अब कहिले बालुवाटार छोड्नुहुन्छ ?
प्रम — छोडेकै सम्झनुस् न! म त नाफाको जीन्दगी बाँचिराको मान्छे, मलाई कुनै कुराको मोह छैन ।
पत्रकार — यस्तो फक्कड जोगी जस्तालाई पनि कुर्सीबाट हटाए त !
प्रम — यो त दिनदशा लागेर हो। भन्छन् नि मान्छेलाई रिन लागोस् दिन नलागोस्। रिन त मलाई लागेको छैन। ठूलो बजेट बनाउँदा देशलाई लागेको हो। दामासाहीले बाँडुम्ला। तर दिन चाहिँ मलाई मात्र लागेको जस्तो छ ।
पत्रकार — कसरी ?
प्रम — त्यत्रो जतन गरेको हुर्काको मित्रता छापामार शैलीमा झ्याप्पै पार्नु भनेको दशा लागेरै त हो नि । दशा भन्ने चिज बाजा बजाएर आउँदैन भन्थे । आफैले भोगियो।
पत्रकार — पदबाट जाँदाजाँदै तपाईँलाई के को चिन्ता छ ?
प्रम — मलाई नवलपरासीमा फेला परेको फलाम खानी, मुस्ताङको युरानियम र पेट्रोल, काठमाडौंको ग्यास भण्डारको चिन्ता लागेको छ । यो काम सुचारु हुन्छ कि हुँदैन भनेर आधा मासु भैसक्यो।
पत्रकार — कस्तो प्रकारको चिन्ता ?
प्रम — यी खानीबाट उत्पादन सुरु गर्ने मेरो योजना निरन्तर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। म रहिरहन पाएको भए केही वर्षमै देश मालामाल हुन्थ्यो ।
पत्रकार — तर लोडशेडिङ घटाउने पनि कुनै उपाय तपाईँको पालामा गर्न नसेकको आरोप छ नि त !
प्रम — त्यो मैले नगरेको होइन। मन्त्रीमण्डल संयुक्त भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ । एकमना सरकार भएको भए अहिले देशाँ लोडसेडिङ फिटिक्क हुने थिएन ।
पत्रकार — तपाईँलाई त पार्टीकै मान्छेले छिर्के हानेछन् हगी?
प्रम — रूख काट्ने बञ्चरो काठकै हुन्छ भन्ने त थाहा थियो । नवलपरासीको फलाम खानीबाट फलाम निकाल्न भ्याएको भए म बञ्चरोको बिंड फलामको राख्‍न लगाउँथे । यस्तै भयो ।
पत्रकार — तपाईँको बहिर्गमनको मुख्य कारण फास्ट ट्र्याक हो भन्छन् नि !
प्रम — त्यो पनि हो। म नेपालले नै बनाउने पक्षमा थिएँ। बजेट पनि छुट्टयाएको हुँ ।
पत्रकार — अब फास्ट ट्र्याकको भविष्य के होला ?
प्रम — यो कुरा त आदित्य दाहाललाई सोध्‍नुपर्छ ।
पत्रकार — एउटा अन्तिम प्रश्न। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले छोड्नुभएको उपाध्यक्ष पदमा कसलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ ?
प्रम — रामकुमारी झाँक्री ।
पत्रकार — रामकुमारी झाँक्री? त्यति जुनियरलाई् ? पार्टीमा मान्लान् त ?
प्रम — म एक तीरले दुई शिकार गर्न चाहन्छु । एक त रामकुमारी महिला हुनुभयो । महिलाको ठाउँमा महिलै ।
पत्रकार — दोस्रो कारण ?
प्रम — त्यति पनि बुझ्‍नुहुन्न ? उहाँ झाँक्री पनि हुनुहुन्छ ।
पत्रकार — झाँक्री ?
प्रम — किन तर्सिनुभयो ? कि तपाईँ पनि पत्रकारको भेषमा छिमेकीको छौंडा नै हो ?
-( राम लोहनीको फेसबुकबाट साभार)